Daawo: Hooyada Ikraan Tahliil: Ma dhici karto in Fahad Yaasiin uu Beledweyne yimaado | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Daawo: Hooyada Ikraan Tahliil: Ma dhici karto in Fahad Yaasiin uu Beledweyne...
Muqdisho (Dalkaan.com) – Qaali Maxamuud Guhaad, oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo shir jaraa’id ku qabatay Magaalada Muqdisho, ayaa ka hadashay safar la qorsheenayo inuu Beledweyne ku tago agaasimihii hore ee Hey’adda NISA Fahad Yaasiin Xaajir Daahir.
Hooyo Qaali ayaa sheegtay in Fahad Yaasiin uusan imaan karin magaalada Beledweyne si uu u helo xil uu ku dhuunti sida ay hadalka u dhigtay.
“Waxaa Beledweyne usoo socdo Fahad Yaasiin oo doonayo inuu helo xil uu ku dhuunto ma imaan karo, dalka wuxuu ku dhisan yahay 4.5, aniga iyo Gabadheedana waxaan kasoo jeednaa laba beel oo ah kuwa ugu weyn ee daga Hiiraan,” ayey tiri.
Hooyo Guhaad ayaa Beesha Gaaljecel oo ay gabadheeda ka dhalatay ugu baaqday inaysan aqbalin inuu Fahad Yaasiin hal habeen ku hoydo Beledweyn.
“Gabadheeda waxay kasoo jeedaa Beesha weyn ee Gaaljecel oo ah Beesha haddii Geel laga dhacdo uusan hal habeen mooro kale ku hoyan, sidee u aqbali karaan in Fahad Yaasiin oo gabadhooda ay ku maqantahay inuu yimaado Beledweyne,” ayey sii raacisay.
Waxay sii raacisay “Anigana waxaan ka dhashay Beesha Xawaadle oo ah Beel uusan cadowgeeda waligiis ilibin ka qaadan, mana aqbalayaan inuu Fahad yimaado Beledweyne.”
Hadalka hooyo Qaali ayaa kusoo aadaya xilli la filayo in magaalada Beledweyne lagu qabto doorashada 25 kursi oo kamid ah Golaha Shacabka, waxaana Kuraasta lagu qabanayo kamid ah midka uu u tartamayo agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin.
Ikraan Tahliil Faarax ayaa muddo dhowr bil ah lagu la’yahay gacanta hay’adda NISA, taasi oo iyadana sheegtay inay afduubatay oo dishay Kooxda Al-Shabaab.
Ikraan waxay bishii August ee sanadkii 1996-kii ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid tahay dhallinyarada dibadda wax kusoo bartay kaddibna dalka dib ugu soo laabtay.
Waxayna khibrad in muddo ah u lahayd shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo laamaha amniga.
Gabadhan ayaa in ka badan shan sano ka hor ku biirtay hay’adda Nabad sugidda ama Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA, iyadoo ahayd madixii amniga internet-ka ee hay’addaas.
Markii ugu horreysay ee ay NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017-kii, sida uu warbaahinta u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali San Baloolshe.
DEG DEG: Imaaraadka iyo Qatar oo war kasoo saaray doorashada Xasan Sheekh
Sawirro: Xasan Sheekh iyo Farmaajo oo kulan ku yeeshay Villa Somalia + Ujeedka
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Villa Somalia kulan kula yeeshay Farmaajo + Ujeedka
Wadahadallo xasaasi ah oo u billowday Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Beledweyne (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in haatan kulan u dhexeeyo madaxweynaha HirShabelle iyo ku xigeenkiisa uu ka...
Ralf Rangnick oo ka war bixinayay wararka dhaawaca Edinson Cavani.
Horudhac: Levante Vs Barcelona ee Horyaalka La-Liga Spain, Wararka Labada koox...
Maxaa ka soo baxay kulankii Hawiye Naceybka ee Xalay Ka dhacay...
Soomaaliya ma u baahantahay iney dib isaga dhigto doorashada oo ay...
Xubnihii Ceelwaaq oo loo diiday iney ka qey-bgalan fadhiga maanta ee...
Barcelona oo xaqiijisay saxiixyada Franck Kessie, iyo Andreas Christensen
Daawo: Xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay sida ay maanta wax u...